About Us - Ningbo Eudemon Child Protective Equipment Co., Ltd
Ammaanka Baby Lock
dhaansha ammaanka Baby qufulka
golaha amaanka Baby qufulka
Baby suuqa kala ammaanka iyo qufulka albaabka
Baby laayeen ammaanka & ilaalada geeska
Baby ilaalada geeska ammaanka
Baby waardiyayaasha ku laayeen ammaanka
Baby xayndaaban ammaanka
Baby dalool ammaanka daboolayaa -Dhalashada
Baby dalool ammaanka daboolayaa -UK
Baby dalool ammaanka -EU daboolayaa
Baby dalool ammaanka daboolayaa-CN
Baby dalool ammaanka daboolayaa-dadka kale
Baby goolhayaha albaabka ammaanka
ammaanka Baby ilaalada qanjaruufo farta
Baby xayndaabka ammaanka
Baby iridda albaabka ammaanka
sariirta ammaanka Baby rail
Baby xayndaabka jaranjarada ammaanka
Baby iridda suuqa kala ammaanka
Ningbo Eudemon Child Protective Equipment Co., Ltd. waa shirkad gaar ah soo saarta oo u shaqeeya qalabka ilaalinta badbaadada carruurta ee beerta dhamaystiran, oo ay ku jiraan cilmi-baarista iyo horumarinta, design, soo saaraan iyo sale.
Shirkadda hadda leedahay warshad ay ku yaallaan meel ka mid ah in ka badan 2000 oo mitir oo laba jibbaaran qalabaysan geedi socodka saarka caaryada wax taaj oo kale iyo wax soo saarka la isku duro sare. Muddo sanado ah, sida shirkaddu ay ku kasbatay macaamiil ammaani gudaha iyo dibaddaba ka. By adag dusin in mabda'a soo saara waxyaabaha sare u-qalma oo bixiya adeegga si fiican loo tixgeliyo.
Waxaan heysanaa koox aad u fiican horumarinta wax soo saarka, ka cilmi suuqa in design sheyga, wax soo saarka iyo maamulka ku ool ah habka oo dhan, si wax soo saarka waa la soo koraya ee forwardlooking a dheeraad ah iyo hab dadnimo. Shirkadda ayaa soo bandhigi doona wax soo saarka dhowr cusub sannad kasta si ay u daboolaan baahida suuqa, sidaas darteed waxaan mar walba taagan safka hore ee warshadaha.
Iyada oo aynu isku duro caag technology processing caaryada sare,-oolnimada sare iyo adeeg heer sare ka dib iibka, EUDEMON leeyihiin helaan badan oo isku halleeya macaamiisha labada gudaha iyo dibaddaba.